Kubadda lagu ciyaari doono horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub oo la shaaciyay…. + SAWIRRO – Gool FM
Kubadda lagu ciyaari doono horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub oo la shaaciyay…. + SAWIRRO
(England) 17 Juuunyo 2019. Maamulka Premier League ayaa shaaciyey Kubadda cusub ee lagu ciyaari doono horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020.
Dhamaan 20-ka kooxood ee horyaalka Premier League ayaa loo qeybin doonaa kubaddahan si ay tababarka ugu sameeyaan kahor bilaabashada xili ciyaareedka cusub.
Kubaddan oo ah mid ilqabad leh oo nooceeda oo kale aan horey loo arkin ee lagu daray magaca Merlin ayaa noqoneysa nashqad gaar u ah horyaalka Premier League, waxaana si weyn uga muuqda midabka basalliga ah.
Dhinaca kale kuabadda lagu ciyaari doono xiligga qaboobaha ee barafka uu da’ayo horyaalka Premier League xili ciyaareedka cusub, ayaa iyadana gabi ahaanteedba laga wada dhigay midibka basaliga ah, si looga fogaado in kubaddu ay u ekaato barafka.
Si kastaba ha ahaatee Shirkadda Nike waxay dooneyso in kubaddan laga daabaco midibo kala duwan waxaana suuragal ah inta uu socdo xuli ciyaareedka cusub ee 2019-2020 inaan aragno kubaddo kala midab duwan oo lagu ciyaarayo.
Halka hoose kaga boggo SAWIRRIDA kubadda lagu ciyaari doono xili ciyaareedka cusub: